मलेशियामा बाधिएको मन	मन नै हो स्वतन्त्र जतापनि बरालिन सक्छ । मनले आफ्नै अनुमति बगैर पनि उड्न सक्छ डुल्नसक्छ र खुल्नसक्छ । मनकै कुरा न हो मनले चाहेको पाए कति खुशी हुँदो हो । नपाए संसारकै दुखी पनि बन्दो हो । आज शहरबाट शब्दहरुमा मनहरुका अनेकन कुरा पस्किन खोजेको छु । जीवनका अनेक रंगहरु फेरिने एउटा यात्राको मोडमा भेट्टिएका अनेकन पात्रहरुका किस्साहरु ।
फरक शैलीका अनुहार र व्यवहारहरु कति बिर्सिएका छन् कति भने भुल्न सकिएका छैनन् । तर प्रसंगका डोरीहरु जतातिरबाट बाँध्ने कोशिश गरिरहँदा पनि आजको शीर्षकमा मलेशियाले अग्रता पाएको छ । तापनि शब्दहरुका घेरालाई पहिला लण्डनबाट घुमाउन चाहन्छु । हिजोआज विद्यार्थीहरुका जमात शिक्षा मन्त्रालयमा बढेको छ कारण उही हो । विदेश उड्ने नशा र त्यसमा जोडिएको उच्च अध्ययन । परिवारवर्ग हर्षित छन् नै किनभने छोराछोरी अब विदेश उड्ने भयो । यस्तै खुशी दिलाएर विदेशमा पढ्न उडेकाहरुका दुखका कथाहरुमा खुशी बनेका परिवारले हेर्न र पढ्न पाएका हुँदैनन् । जो खस्यो खाल्डोमा उसैलाई थाहा हुन्छ गहिराई । समाजमा नाक र ईज्जत जोगाउन समेत ठूलो शान हो छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनु ।
This entry was posted on फ्रेवुअरी 2, 2010 at 5:01 अपराह्न and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: मलेसिया	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.